Dhaabileen Oromoo biyya alatti wal cacabsan kun akkasin biyya yoo galan bala qaba.
Dhaabbilen Oromoo biyya alatti mandhefatan Amanta fi Gandan wal qooqoodan kun akka kanan yoo biyya galan bala gudda Oromooti fiduu. Dhaabileen waggoota dheeraf wal cacabsan wal dura dhabacha jiran kun biyya alatti araramuu kan dhadhaban kun rakkoo kana fudhatan biyya seenun bala kana gara uummataatti ceesisuu maluu. Dhaabilee kun gaafi saba fi bilisumma uummatti hawwin Eegatuu shafsisuu dhisaan fedhii angoo fi danta dhunfa jeecha waggoota 20 wal dura dhabachuun yaaka gudadha.
Dhabbile EPRP fi Mesion waggoota 60 keessa adda adduma ala fudhatan biyya keessa galan bala Ethiopia keessatti isaan geesisan seenan galmeese jira. Dhaabilee ABO irra bakka 20tti cacaban kun ammoo EPRP fi Meison caalaa uummataa keenya irraatti bala gudaa fiduu. Akkamtti jeechuun gaafachu ni dandeesuu ta’a.
1. Qabsoon Habasha irratti geggesun dagatamee Oromoo akka wal lolu goochuu dhiiga dhangalasisuu maluu akkuma bara 2002 fi 2008 godhan sun,
Oromoon yerroo wal lolee wal cabsuu Amharii ykn Habashan bakka qabachuuf caaraa argata; Fkn Fillannoo bara 2005 Bushoftuu irratti Oromoo 13 wal dorgomee wal kufisee Qiinjiti sagale 9% argachuun sagale Oromoo 91 kufiftee mo’achu danda’uu ishee.
Oromoon tokko ta’ee waggoota 130 garbuuma jala jiratee dhabilee adda addatti faca’ee marii tokko malee walii isaa wal lolaa diina mo’achuu hin danda’uu,
Namoon dhabbilee ABO kana cacabsani wal dura dhabacha jiran kun ergama diina fudhatan haawwii diina dhugomsaa jiru,
Dhaabilee Oromoo Yerro uummatti keenya dararama jiru kana rooroon Oromoo irra ga’aa jiru kun isaan gadisisee tokko ta’uu dadhabun isaan harki diina keessa jirachuu argisisa,
Ergamtoon Habasha gartuu tokko amo QBO gara qabsoo amanta musilimatii jirjiruun gaafi bilisumaa uumataa Oromoo jijiruu yaalaa jiru, kun amoo ergama diinati.
Dhaabilee Oromoo biyya keessa dhiibba TPLF hunda fi yakkaa qooqoodu TPLF isaan irratti rawwatuu dandamatan tokkuma isaan Eegachuu irra darban dhabilee Oromoo WFDO fi OBKOn Tokko ta’uu yamuu danda’an wari ala dhiibban tokko irra hin jire laga fi amantan wal qooduun diinii hanga sammuutti isaan keessa galuu mulisa.
Qabsa’oon Ogaden durani yerro amma miliishaa ogaden ta’an naannoo Oromiyya Harargee gutuuman guututti dhunfatani waan barbadan gochaa yamuu jiran kana, lammin Oromoo qabeenya isaa samamee jirratti koonkoolata irra ofan yamuu ajjessan kana, deggersa lola gochuufin hafe media Oromoo ilee ciimsee iyyachuuf feedhi hin qabuu. Sababin isaa qamii oddefannoof yaada keenuuf hin jiru. Oromoon Beneshangul Gumuz irra Buqa'aan, Qabeenyi isaan samamee, Lubun isaan badee kaneen akka binensatti qalaman, kaneen Gallanaatti naqamani dhuman dhimmi isaa tokko ilee hin ilaalamnee, hin dubatamnee, Median Habasha hundi ni dhoksee. Oromoo lubuu isaa egachuuf bila fi gajara bitatan ilee meesha dhoksitan jeechun OPDOn oromoo dararaa jirachuun ishee beekame jira. Balinan dhimma kana fi Oromoon mal gochuu akka qabu isini dhiyeesuuf yaala: Amhara media qabuun wal tumese fi wali dirmatee Amhara Buqa’ee bakkatti yerroo debisiisuu Oromoon ammoo Dhaabi tokko Bakka 20tti wal qooqode wali irratti olola labsun rakkon Oromoo akka dhokatu godhee jira.
ABOn malatoo uummataa Oromoo hunda ta’ee Malif bakka 20 cacabe?. ABO, IFLO, IBSO; ULFO, Gummi, QC, Shane, AWO, Jijjirma-Ginbot 7ti galee, Jijjirama-TPLFt galee, KY. jijjirama A-S-, KY jijjirma H-L, KY-jijjirma I-U, KY Jijjirma A-K, KYGumi K/A-G fi B- G/m, KY-Jijjirama A-J fi T-a , KY.ABO, L-W, FDO fi ODF dha. ABO milka’uu dhaabuun isaa irra kan ka’ee Shanee fi Qama Ce’eeumsati gargari cabuun lubu Qabsa’oota Oromoo heedu galafatee jira. Bara 2008 ammoo jijjirama kan ofiin jeedhu Shanee irra cabuun uummataa Oromoo bakka lamatti diiguun hawwassa Oromoo biyya ala diigan. ABOn jijjirama kun utuu hin turin gargari Cabee garii tokko TPLFti harka ladhate. Dhabbilee Oromoo yerro Oromoon lafa isaa irra buqa’aa jiru, Baratoon Oromoo university hunda irra ari’ama jiran,Oromoon biyya arabbatti dararama jira, shamaran Oromoo algan itti xabata jiru, Oromoo biyya jiru ganda isaa keessatti wal gurmeesun waan gochuu qabu itti yaadu qaba malee nama biyya ala jiru irra waan tokko eguu hin qabu. Miseensoon Keenya Biyya Keessa Leelistoota Gandumaa fi Amanta irra bilisa ta’uu fi dhaabilee diina Oromoo ykn Dhaabilee Habasha kamin iyuu waliin qunamtti akka hin goone isin akkekachifna.
Kanaafuu ABOn qabsoo furgasuu dadhabuu isaa irran kan ka’ee akkas wal cacabsuu irra darbee Hawwassa Oromoo Ganda fi Amantan wal qoodamee hojiin qabsoo dhifamee wal irratti olala adeemsisun hojii goodhatamee jira. Dhabbileen Oromoo biyya keessa jiran Dhaabilee ala kana irratti maqaa xureesi ykn tumsa, qunamtti ykn deggersa gochuu irraa akka of qusatan isiin gaafacha. Rakko dhabileen Somalia uummataa Somalia irran ga’aan hubachuun siiritti irratti mari’atame malee akka salphatti qunammtti gochuun wal dura dhabachuu waan fiduuf of egachuu qabna. Miseensoon dhabbilee biyya keessa tokkuma miseensoota fi tokkumma hawwasa Oromoo egsisuuf tarsimoo dhaabbi keenya yerro dheeraf itti fayadama ture itti fayadamuu qabna. Dhaabilee qunamuun ergaa diina irra Bilisa ta’uu isaan erga markanefanee booda ta’u qaba.